यी महिला जस्ले रिलेसनमा राखेर लिइन् ४ जना पुरुषको…. – List Khabar
Home / समाचार / यी महिला जस्ले रिलेसनमा राखेर लिइन् ४ जना पुरुषको….
यी महिला जस्ले रिलेसनमा राखेर लिइन् ४ जना पुरुषको….
admin December 3, 2021 समाचार Leaveacomment 135 Views
७५ वर्षकाे उमेरमा इसाओ काकेहीकाे स्वास्थ राम्राे थियाे । सन् २०१३ मा उनले चिसाकाे काकेही नाम गरेकी एक विधवासँग नयाँ स’म्ब’न्ध गाँ’सेका थिए । जापानकाे जाेडी मिलाइदिने एउटा निकायमार्फत उनकाे ६७ वर्षीया ती विधवासँग भेट भएकाे थियाे ।दुई महिनापछि याे जाेडीले विवाह गरे । तर, इसाओ काकेही अर्काे बसन्त देख्न पाएनन् । डिसेम्बर २८ मा उनी जापानकी कुख्यात ब्ल्याक विधवाकाे चाैथाे शि’का’र बने ।
७४ वर्षीया चिसाकाे काकेही तीन ओटा पार्टनरकाे ह’ ‘त्या र चाैथाेकाेकाे ह’ ‘त्या प्रयासकाे अ‍भियाेगमा मृ’त्यु’द’न्ड कुरेर बसेकी छन् ।उनकाे ह’ ‘त्या शृंखला सन् २००७ बाट सुरु हुन्छ, जतिबेला उनी ६१ वर्षकी थिइन् । साेही अभियाेगमा उनी सन् २०१४ मा पक्राउ परेकी थिइन् ।
लामाे सुनुवाईपछि सन् २०१७ मा उनलाई एक अदालतले मृ’त्युद’न्ड’काे फैसला सुनायाे । ‘जाेडी मिलाइदिने निकायमा पुगेर उनले एकपछि अर्काे बृद्धसँग स’म्बन्ध गाँ’से’र उनीहरुलाई वि’ष खु’वा’ए’र ह’ ‘त्या अनुसन्धानका क्रममा दखिन्छ,’ उनकाे मुद्दाबारे फैसला गरिरहेका एक न्यायाधीश भन्छन् । ती विधवाले याेजनब’द्ध ढंगले ह’ ‘त्या ग’रेकाे उनकाे भनाई छ ।
यसरी सुरु हुन्छ ह’ ‘त्या शृंखला
सन् २०१४ सम्म उनकाे बारेमा जापानमा विरलै नाम सुनिएकाे थियाे । जापानकाे दक्षिणपश्चिम सागामा जन्मिएकी चिसा सुरुमा एउटा छपाईसम्बन्धी कारखानामा काम गरेकी थिइन् । उनकाे २३ वर्षकाे उमेरमा सन् १९६९ मा विवाह भएकाे थियाे । सन् १९६९ मा पतिकाे मृत्युपछि उनी विधवा बनेकी थिइन् । पतिकाे मृत्युपछि उनकाे ह’ ‘त्या शृंखला सुरु भएकाे थियाे ।
सन् २००७ मा उनी ७८ वर्षीय ताेसिकाई स्युहिरा’ेसँग स’म्बन्ध’मा रहिन् । सन् २००७ काे १८ डिसेम्बरमा काकेही अ‍ाफ्ना सन्तानसहित स्युहिराेसँग खाना खाँदैथिइन् । त्यहीबेला स्युहिराेकाे खानामा वि’ ‘ष रा’खिदिइन् । १५ मिनेटमै स्युहिराे अ’चेत हुन्छन् र केही बेरपछि उनकाे मृत्यु हुन्छ ।
केही वर्षपछि उनले अर्का पुरुष मासानाेरी हाेन्डाकाे ह’ ‘त्याकाे ष’डय’न्त्र बुन्छिन् । ७१ वर्षसम्म मासानाेरी हाेन्डा राम्राे अवस्थामा थिए । सन् २०११ सम्म उनकाे डायबिटिज सामान्य थियाे । साेही वर्ष उनी अकस्मात उनै विधवा चिसाकाे काकेहीसँग नजिकिन पुगे । केही समय उनीहरुबीच डेटिङ भयाे । अर्काे वर्ष उनीहरुले विवाह गर्ने याेजना गरे ।
सन् २०१२ काे ९ मार्चमा उनले हाेन्डालाई स्टाेरमा भेटिन् । त्यसपछि दुबैजना आआफ्नाे बाटाे लागे । साेही दिनकाे पाँच बजे हाेन्डाले हाे’स गु’मा’ए । दुई घन्टापछि चिकित्सकले उनकाे मृत्यु भएकाे घाेषणा गरे । उनकाे रहस्हयमय ह’ ‘त्यामाकाकेहीकाे सं’ल’ग्न’ता रहेकाे अदालतकाे फैसलामा उल्लेख छ ।
चिसाकाे काकेहीले सन् २०१३ मा एक क्यान्सर बिरामीलाई रिलेसनमा राखेर केही समयपछि ह’ ‘त्या ग’रेकी थिइन् । एजेन्सी
Previous कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित
Next मलेसियाले डिसेम्बरसम्ममा नयाँ कामदार भित्राउने, नेपालीको के छ सम्भावना ?